बल्ल बाहिरियो घटनाको यथार्थ : यस्तो रहेछ प्रेमिका सुष्मा र नवराजको प्रेम कहानी, सुष्मा र नवराजको प्रेममा ५ जना साथीले दिए बलिदान ! – Online Nepal
May 26, 2020 1638
यो घटनाको बारेमा अहिले के हुदै छ ? प्रतिनिधि सभामा के भयो आज ? साथै आमा र बुवासंग गरिएको कुराकानी पनि यसको तल रहेको छ पढ्नुहोला
काठमाडौं । तीन वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक र पश्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी युवतीकहाँ पुग्नुभयो । नवराज र उहाँका १९ जना साथी बाटोमा हौसिँदै गएको बताउँछन् । तर जब युवा सोती पुगे, माहोल एकाएक बिग्रियो ।
दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको ‘जात’ नमिले पनि उनीहरु विवाह ब’न्धनमा बाँ’धिन चाहन्थे । तर, नवराजका आमाबाबालाई भने अन्तरजातीय विवाह मन परेको थिएन । छोराले ढिपी गरेपछि हुन्छ भन्ने मुडमा आफूहरु पुगेको अभिभावक बताउँछन् । त्यसैले नवराज शनिबार राति आफ्ना साथीहरुलाई लिएर दुलही ल्याउन सोती गएका थिए ।
पटक–पटक मानसिकरूपमा त’नाव र शारीरिकरूपमा कु’टपि’ट व्यहोरोका नवराजलाई शनिबार ठूलो सङ्ख्यामा साथी लिएर आउनु भनी युवतीले सल्लाह दिएका कारण सोहीअनुसार १९ साथी लिएर सोती गएका थिए । जब उनीहरु घर नजिकै पुग्दा युवतीभन्दा, युवतीकी आमाको नजर युवामा प¥यो ।
त्यसपछि उहाँले “जति पि’टाइ खाए पनि केही लागेन है, फेरि आइस् आज त मा’रेर फालिन्छ” भन्दै गाउँका मानिसलाई बोलाएपछि युवामाथि कु’टपि’ट शुरु भएको घाइते युवा आशिष विकले बताए । कु’टपि’ट शुरु हुँदै गर्दा आफूहरु भागेर करिब चार किलोमिटर दूरी पार गरेको आशिषको भनाइ छ । ल’खेटी–ल’खेटी भेरी नदीसम्म पु¥याउँदा धेरै साथी घाइते भएको उनको दाबी छ । नवराजको शनिबार नै निधन भयो भने ज्यान बचाउन नदीमा हा’म फालेकामध्ये चौरजहारी नगरपालिका–१ टीकाराम सुनार र भेरी नगरपालिका–४ का गणेश बुढाको पानीमै डु’बेर निधन भयो । कु’टाइबाट घाइते भएका युवाले पानीमा पौडिन नसक्दा निधन भएको घाइतेले बताएका छन् । अन्य भेरी नगरपालिकाका सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही अहिले पनि बे’पत्ता छन् ।
घाइते युवा सरोज भँडेल भन्छन्, “हामी आधा घण्टासम्म सडकमा दैडिरहेका थियौँ । सडक तेर्सो भएकाले मा’रिने ड’र भएपछि नदीमा हा’मफालेका थियौँ । आफूहरुले नदीमा हा’मफाले पनि ढु’ङ्गामु’ढा गर्न छाडिएन । प्रहरी आएपछि हामीलाई पक्राउ गरेपछि बल्ल हामी सुरक्षित भएको महसुस भयो ।”
‘पश्चिमरुकुम घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समित गठन गर्न माग’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पश्चिमरुकुम घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै काँग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले २१औँ शताब्दीमा जातीय हिं सा र नरसं’हार हुनु सभ्य समाजका लागि सुहाउँदो विषय नभएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले घटनामा बे’पत्ता भएकाको खोजी, घाइतेको उपचार, मृ’तकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपालको इतिहासमै ठूलो जातीय नरस’हार भएको उहाँको भनाइ थियो । “जातीय विभेदको घटनाबाट छ जनाको ज्यान गएको छ । तीन जनाको शव भेटिएको छ भने तीन जना बे’पत्ता छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सामान्य घटनामा छानबिन समिति बनाउने गरे पनि जातीय विभेदका कारण भएको घटनामा छानबिन समिति गठन नहुनु दुःखद् छ ।”
स्थानीय जनप्रतिनिधिको रहोवरमा घेराबन्दी गरेर दलित युवामाथि सा’ङ्घा’तिक ह मला गरिएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । “दलित युवालाई चार किलोमिटर ल खेटेर भेरी नदी किनारमा लगेर ह त्या गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न असहयोग गरेको जस्तो बुझिएको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई घटनाको छानबिन नगर्न दबाब दिइएको पाइएको छ ।” उहाँले जाजरकोट घटनाका बारेमा गृहमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिन माग गर्नुभयो ।
सांसद पार्वतीकुमारी विशुन्खेले पश्चिमरुकुम घटनाले समग्र ६० लाख दलितको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन माग गर्नुभयो । यस्तै रेणुका गुरुङले उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद जनार्दन शर्माले घटनाको प्रकृति, यथार्थ अध्ययन गर्न जाजरकोट र रुकुमका प्रशासन अन्ततः सक्रियतापूर्वक लागेको आफूले पाएको बताउनुभयो । स्थानीय पार्टी, सरकार घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न जुटेको जानकारी दिनुभयो ।
घटनाको छानबिन गर्न कुनै राजनीतिक दबाब हुनै नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । “रुकुममा जातीय विभेदका घटनाको राजनीतिकरण हुँदैन, छानबिन हुन्छ”, जनप्रतिनिधिका हैसियतमा उहाँले भन्नुभयो । सांसद शर्माले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा नेपाली काँग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफूले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद शर्माले घटनामा राजनीति नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गर्दै उहाँले रुकुमको जनप्रतिनिधिको हैसियले आफूले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
काँग्रेसका सांसदको विरोधका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संयमता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । लगत्तै सभामुख सापकोटाले काँग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो । सांसद रसाइलीले घटनाका बारेमा गृहमन्त्रीको जवाफ चाहेको बताउँदै घटनालाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका सङ्घीय सांसदसहितको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त घटनाको छानबिनका लागि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो । जाजरकोट र रुकुमपश्चिमबीचका केही युवाका बीचमा विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिनका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न अख्तियारी दिइएको छ । यही जेठ १० गते रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका¬–८ आउला बस्ने वीरबहादुर मल्लकी छोरी १७ वर्षीया सुष्मालाई भगाई ल्याउनका लागि जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का मोहन विकका छोरा २१ वर्षीय नवराजसहितको १९ जनाको समूह स्थानीय सोती पुगेको अवस्थामा झ’गडा भएको थियो ।
मन्त्री थापाका अनुसार युवतीलाई भगाई लाने क्रममा केटी पक्ष र केटा पक्षका आफन्तबीच झैझ’गडा हुँदा केटी पक्षकाले केटा पक्षलाई भेरी नदीतर्फ ल’खेटेका थिए । जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ बस्ने केटा पक्षका २१ वर्षीय सुदीप खड्का सामन्य घाइते भएको र केटा पक्षकै पाँच जनालाई अस्थायी प्रहरी पोष्ट रावतगाउँ र सात जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्र’णमा लिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्म फेला परेका शव परीक्षणका लागि जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार मृ’तक नवराज विकको शव जेठ १० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ स्थित भेरी नदीको बीच भागमा फेला परेको, रुकुम पश्चिम चौरजहारी–१ का लामिछाने बस्ने २० वर्षीय टीकाराम सुनारको शव जेठ ११ गते फेला परेको र जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का १७ वर्षीय गणेश बुढाको शव फेला परेको छ ।
हालसम्म फेला नपरेकाको खोजी कार्य जारी रहेको छ । मन्त्री थापाका अनुसार भेरी नपा–११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सञ्जु विकको खोजी कार्य जारी रहेको छ । बे’पत्ताको खोजीका लागि आवश्यकताअनुसार गोताखोरसमेत परिचालन गरिने उहाँको भनाइ छ । नवराज विकसहितको समूहमा गएको रुकुमपश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–१ का गोपाल बुढाथोकी बीच बाटोबाटै फर्केको, घाइते सुदीप खड्काको मिसन अस्पताल चौरजहारीमा उपचार गरी ‘डिस्चार्ज’ भइसकेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । केटा पक्षको सम्पर्कमा आएका सबै १२ जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा बुझाई सामान्य सोधपुछपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार युवतीका बुबा बीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल र स्वयं युवती सुष्मा, वडाध्यक्ष डम्बर मल्ल, प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुनमगर, रमेश मल्लसहित १२ जनालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्र’णमा लिएको छ । सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव कायम राख्न, शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मजबुद बनाइराख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र रुकुमपश्चिमबाट समन्वयात्मक ढङ्गले काम भइरहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
सांसदहरु लक्ष्मी परियार, विमला विक, देवप्रसाद तिमिल्सिना, निरादेवी जैरु, सुजाता परियार, आशाकुमारी विक, उमाशङ्कर अरगरिया, विन्दा पाण्डे, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवाल, बालकृष्ण खाँड, महेश्वर गहतराज, देवेन्द्रराज कँडेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, सरिता गिरी, शरत्सिंह भण्डारी, रामबहादुर विष्ट, विमला नेपाली, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, मीनेन्द्र रिजाल, गोपालबहादुर बमलगायतले घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
जफावमा गृहमन्त्री थापाले सरकार मुलुकमा कानूनी राज्य स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले जतिसक्दो छिटो सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो । सरकारले सत्यतत्थ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिप्रति आशङ्का नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले घटनामा संलग्नमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
रुकुम । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटका २० वर्षीय नवराज बिकले जातीय विभेद र अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध कै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । उनलाई जन्ती बनेर साथ दिन गएका अन्य दुई साथीको पनि ज्यान गएको छ । परिवारकै एक्ला छोरा नवराजको निधनले उनको परिवार वि’छिप्त बनेको छ । वेहुली लिन गएको छोरा नदिको वगरमा मृत फेला परेपछि भेरी नगरपालिका ४, रानागाउँकी उर्मिला विश्वकर्माको (नवराजकी आमा) वेहोस जस्तै हुनुहुन्छ । छोरालाई साथ दिन गएका नवराजका दुई साथीको पनि त्यस्तै अवस्था भएको छ । यो घटनाले अहिले रुकुम शो’कमा डुवेको छ । श्रीमान मोहनलाल अस्वस्थ्य भएका कारण उनी आफ्नो दैनिकी काम पनि गर्न सक्दैनन् । एक्लै ४ सन्तान हुर्काएकी उर्मिलाको अहिले संसार उजाडीएको छ ।
जेठी छोरीको विवाह भइसकेको छ । तीन सन्तानको भविष्यको निन्तामा थिइन् । छोरा नवराज मात्र हुन् । उनै जवान छोरालाई चुडेर लगेपछि उनको संसार उजाडिएको हो । समाजमा अग्रणी भूमिका खेल्ने उनका छोराको राम्रै इज्जत थियो । उनले नवराजको प्रेमिका घरमा आउँदा सुरुमा त कोही साथी होला भनेर वास्ता गर्नुभएको थिएन। तर पछि प्रेमीका भन्ने थाहा पाएपछि भने उर्मिलाले पनि सम्झाएको बताउनु भएको छ । समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पछि आफ्नो छोरालाई समस्या होला भन्ने ठानेर किशोरीलाई पनि यो सम्बन्ध अगाडी नबढाउ भनेर सम्झाएको बताउनुहुन्छ । तर घटनाले यस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा भने आफुले नसोचेको उनी बताउछिन ।
सानो जातले ठूलो जातलाई मन पराउनु हुँदैन भने कानुन लगाएर जे’ल हालेको भए पनि हुन्थ्यो । मा’रिदिए बाबु कसलाई गुहार माग्न जानु ? सरकारले हाम्रो पीडा सुन्दो रहेनछ ।,” उर्मिला निरूपाय हुँदै पीडा पोख्नुहुन्छ । आफु त्यो दिन घरमा भएको भए छोरालाई त्यसरी जान नदिने उहाको भनाइ छ ।
तिमीहरु ठकुरी ठूला जातका हामी दलितसँग विवाह गर्न राम्रो हुन्न भन्दा पनि दुबैले मानेनन् । म शनिवार घर भएको भए मैले जानै दिँदैन थिएँ । उनले यस अघि पनि सोही युवतीका कारण नवराजलाई स्थानियले प्रहरीकहाँ बुझाएको बताउनुहुन्छ । पहिला गयो र प्रहरीलाई बुझाए फेरि त्यस्तै गर्लान् भनेर मैले रोक्ने थिएँ । त्यो केटीले लिन बोलाएकी छ जाऊँ भनेछ र साथीहरु लगेर गएछ । उनले केही दिन अघि नजराज र युवतीबीच भएको फोनको कुराकानी पनि सुनेको बताउनुहुन्छ । युवतीले आफ्नो पेटमा बच्चा भएको र आफ्नो अन्तै विवाह गरिदिन लागेको नजराजलाई सुनाएकी थिइन् ।
‘मेरो बाबु आमाले अन्तै बिहे गराइदिन लागेका छन् । पेटमा छ भन्दै थिइन् । यताबाट छोराले मेरो बच्चा मलाई चाहिन्छ । अरु मलाई केही चाहिँदैन भन्दै थियो,’ उहाले भन्नुभयो । एउटा मात्र छोरा थियो । प्रहरीमा भर्ती हुन थालेको थियो । हामी गरिब दलित हौं । उनीहरु ठकुरी त्यो केटीसँग सम्बन्ध राख्न छाड भनेकै हौं । तर मानेर अहिले ज्यानै हाली दिए, बाबु मुनलालले भन्नुभयो । नवराज र सुष्मबीच प्रेम सुरु भएको हप्ता दिनपछि केटी (सुष्मा) आफ्नो घर आएको नवराजका बुवा मोहनले बताउनुभयो । त्यहाँ सुष्मालाई जात मिल्दैन तिमीहरू अहिले नै यो सम्बन्धलाई छोड भन्दै सम्झाएका उहाँले बताउनुभयो।
मृ’तक युवाका बुवाले भन्नुभयो, “हाम्रो जात नमिलेकै हो, यो विवाह ठिक छैन भनेर मैले पटक–पटक भनेको थिएँ । दुईपटक प्रहरीकहाँ उहाँहरुले आफँै उजुरी गर्दा छलफलमा जाँदा उहाँहरु आफँै छलफलमा नआउँदा हामी फर्किएका थियौँ ।” नवराजका बाबाका अनुसार ती युवती पुसमा दुईपटक नवराजको घरमा आएकी थिइन् । नवराजका बुवाले यो अन्तरजातीय कुरा भएकाले सम्भव छैन भनी पठाइदिएका थिए । “शनिबार बुहारी लिन जाँदा यो अवस्था आयो”, नवराजका बुवाले भन्नुभयो ।
घटनामा दोषी रहेको आरोपमा रुकुम प्रहरीले चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका बुवा वीरबहादुर मल्ललगायत १२ जनालाई पक्राउ गरिएको जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएएपी) किशोर श्रेष्ठले बताउनुभयो । मृ’तक युवाको शव जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ । घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै आफन्तले शवको परीक्षण गर्न दिएका छैनन् ।
‘सम्झाउँदा नमानेर फेरि केटीलाई आफ्नो भाइलाई मेरो घरमा पठाइन्,’, ‘एक हप्तासम्म बसेर गए।’ गत पुसमा स्थानीय थाप्लेमा लाग्ने मेला पनि नवराज र सुष्मा भेटिएको उँहाको भनाइ छ। ‘शनिबार म घरमा थिइनँ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘आमा (उर्मिला) लाई बुहारी ल्याउँछु भनेर निस्केको रहेछ। बुहारी ल्याउला भनेर पर्खेका थियौं तर जात नमिलेकै कारण छोराकोे शव आयो।’
पति मोहनलाल नेपाली ढाडका बिरामी छन् । पुर्ख्यौली काम गर्दा–गर्दै ढाड सड्काएका मोहनलाल मेलापात त परै जाओस्, हिँडडुलसमेत गर्न सक्दैनन् । मेलापात, भारोपर्मदेखि छोराछोरीलाई बाटो देखाउनेसम्मको दायित्व उनै उर्मिलाकै काँधमा आएको छ ।
तैपनि उर्मिला निराश हुनुहुन्थेन । तामाका मुनाजस्ता चार छोरोछोरी थिए । उनीहरूको अनुहार हेरेर उनी आफ्नो दुःख बिर्सिनुहुन्थ्यो । “आफूभन्दा माथ्लो जातको केटी भन्ने थाहा पाएपछि मलाई असाध्यै डर लाग्यो,” उंहा भन्नुहुन्छ , “गाउँलेले के भन्लान् ठानेँ र छोरालाई एकान्तमा बोलाएर ‘उसकै घर पुर्‍याइदे, घर ल्याउनुहुन्न क्या बाबु’ भनेँ ।”
माथ्लो जातको केटी ल्याएको थाहा पाएपछि छोरालाई दुई हातै जोडेर बिन्ती गरेको उर्मिला बताउँनुहुन्छ । तर छोराले टेरेनन् । “बरु दुईचार दिन यतै बस्छिन् । तपाईंलाई सघाउँछिन् भन्न थाल्यो । मलाई धेरै ड’र लाग्यो । छोरालाई हप्काइदप्काइ पनि गर्न सकिनँ,” उनी थकथकी मान्दै सुनाउँउनुहुन्छ।
“दोस्रोपटक पनि घरमा ल्याएपछि मैले छोरालाई बेस्सरी ह’प्काएँ । ‘हामीलाई उसै त गाउँका मान्छेले निको मान्दैनन् । ठूला जातको मान्छेलाई आँखा लगाउने भनेर भनाइ खानुपर्छ । अरूले भन्ने बाटो नदे’ भनेर सम्झाइबुझाइ गरेकी थिएँ । उसको मायामा अन्धो भइसकेको रहेछ के मान्थ्यो,” उर्मिलाको भनाइ छ । उर्मिलाले पनि छोराको प्रेमसम्बन्ध छुटाउन नखोेजेकी होइनन् । उनले ती किशोरीलाई पनि सम्झाएको बताउँनुहुन्छ । किशोरीले अहिलेको कालमा सानोठूलो जात हुँदैन र यसमा अल्झनुहुँदैन भनेर उल्टै सम्झाएको उर्मिलाको कथन छ ।
“तल्लो जातको भएर आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर गा ली गलौ’ज गरेका थिए । छोराले त भनेको होइन,” आमा उर्मिला बिलौना गर्दै भन्नुहुन्छ, “उसका साथीहरूले पनि सम्झाउने कोसिस गरेका थिए रे ” तर पनि नवराज किशोरीसँगको प्रेमबाट पछि हट्न नमानेको आमा गुनासो गर्नुहुन्छ ।
उनीसँगै गएका अर्का चौरजहारी नगरपालिकाका टीकाराम विकले पनि साथीका लागि बलिदान दिए। अन्य चार अहिले पनि बे’पत्ता छन् भने १२ जना प्रहरी हिरासतमा छन्। करिब राति एक बजे भेरी नदीमा शव भेटाएको भिडियो प्राप्त भएको छ। बग्दै गरेको शव स्थानीय एक युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत लाइभसमेत गरेका छन्।
केटी पक्षले खेदाएपछि भा’ग्ने क्रममा भेरी नदीमा बे’पत्ता भएका ६ जना मध्ये तीन जनाको शव फेला परेको छ। अझै तीन जना बे’पत्ता छन्। शव फेला परेकामा नवराजसँगै चौरजहारी पश्चिमका टीकाराम विक र भेरी नगरपालिकाका गणेश बिएम रहेका छन्। उनीकोहरूको शव नदीमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। गाउँले ल’खेटेपछि केटा पक्ष भाग्ने क्रममा भेरी नदीमा बगेको इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक धर्मसिंह विष्टले बताउनुभयो।
अभियुक्त सार्वजनिक नगर्दासम्म लास नबुझ्ने मृतका परिवारको भनाई, प्रहरीले भने लास गन्हाउन लागेको भन्दै पोष्टमार्टम गर्न दबाब
शनिबार राति पश्चिम रुकुम चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा तिनजना युवकको म’त्यु भएको छ । गाउँलेहरुको कु’टाईबाट जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ रानागाउँका नवराज विक, टिकाराम बिक, गणेश बुढामगरको मृ’त्यु भएको हो । नवराज बिबाह गर्नकोलागी सोतीस्थित आफ्नो प्रेमीका सुस्मा मल्ललाई लिन गएका थिए । नवराज र सुस्माबीच लामो समयदेखिको प्रेम थियो । आफ्नो प्रेमीकाकै आग्रहमा नवराजले आफ्ना साथीहरुलाई संगै लगेर सुस्मालाई भगाउनकालागी लिन गएका थिए । सोही खबर सुस्माका घर पट्टिकाले थाहा पाएर गाउँका युवाहरुलाई खबर गरी कु’टपी’ट गराएका थिए ।
गाउँलेहरुको कु’टाईबाट नवराज र उनका केही साथीहरुको मृ त्यु भएको हो भने केही ग’म्भिर घाईते भएका छन् । त्यसरी ग’म्भिर घाईते हुनेहरुमा १२ जना रहेका छन् । नवराजसंगै जाजरकोटबाट १९ जना उनका साथीहरुसंगै गएका थिए । ती १९ जना मध्य १२ जनाको अवस्था निकै नै गम्भि’र भएको नेकपा प्रदेश नं। ५ का कमिटि सदस्य एवं दलित फाँटका ईन्चार्ज पुजन विश्वकर्माले ताजा खबरलाई जानकारी दिनुभएको छ ।
ईन्चार्ज विश्वकर्माका अनुसार ६ जना बे’पत्ता भनिएकाहरु मध्य ३ जनाको लास भेटिएको छ । जस्मा प्रेमी नवराज वि।क, टीकाराम वि।क र गणेश बुढा मगर रहेका छन् । गणेशको लास हिजो सोमबार साँझ ४ बजेतिर भेटिएको थियो । अझैं ३ जना पत्ता लाग्न नसकेको ईन्चार्ज विश्कर्माले जानकारी दिनुभएको छ । ती मध्य १ जना भने गाउँलेहरुको झ’डपबाट भा’गेर सकुशल घर फर्कन सफल भएका छन् ।
जाजरकोटमा भएको उक्त घटनाको विरोधमा हिजो सोमबार जाजारकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ घण्टा गाउँलेहरुले ध’र्ना दिएका छन् । घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी कारवाहीकोलागी माग गर्दै गाउँलेहरु सबै मिलेर प्रशासन अगाडी धर्ना दिएका हुन् । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै २ बुँदे माग सहित कार्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल सकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको पनि ईन्चार्ज विश्कर्माले जानकारी दिएका छन् ।
ईन्चार्ज विश्कर्माका अनुसार बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा ह’त्यामा संलग्नहरुको सर्वस्वहरण सहित आजन्म काराबासको सजाय, घाईतेहरुको स्वास्थ्य उपचार, मा’रिएकाहरुलाई सहिद घोषणा, र बे’पत्ताहरुको चाँडो भन्दा चाँडो खोजी गरियोस् भनेर २ बुँदे माग सहित ज्ञापनपत्र पनि बुझाईएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरुमा गैर सरकारी संस्था महासंघ ५ नं। प्रदेशका अध्यक्ष धर्मलाल रोकाय, नेकपा ५ नं। प्रदेशका प्रदेश कमिटि सदस्य एवं दलित फाँटका सहईन्चार्ज पुजन विश्कर्मा, त्यसैगरी प्रेस संयोजक बाँकेका सहसंयोजक हेमन्त वि।क, दलित गैसस संस्था महासंघ प्रदेश न। ५ का नेता दिल बहादुर परियार लगाएत रहेका छन् । यही टीम आज सत्य तथ्य पत्ता लगाउन रुकुम चौहजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा पनि जाने भएको छ ।
ईन्चार्ज विश्कर्माले ताजाखबरसंग कुराकानी गर्दै भने,‘हामीले पाएको जानकारी अनुसार अभियुक्त भनेर समातिएकाहरुलाई प्रहरीले नसमातेका र उनीहरु आ–आफ्नै घरमा बसिरहेका छन् । यसका साथै मृ’तकका परिवार र आफन्तले अभियुक्त सार्वजनिक नगरेसम्म ला’स नबुझ्ने बताएका छन् तर प्रहरीले भने ला’स गन्हाउन लागेको भन्दै आज नै पोष्टमार्टन गर्न खोजि रहेको छ ।’ ईन्चार्ज विश्कर्मा अगाडी भन्छन्,‘प्रहरीको यस्तो गैर जिम्मेवारपुर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिले ह’त्यारालाई बचचाउन खोजिएको देखिन्छ ।’
जाजरकोट घटना हिन्दु दर्शनले जन्माएको जातिय छुवाछुत र विभेद होः अध्यक्ष रोका
नेपाल मगर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोका मगरले जाजरकोट घटना प्रकरणका विषयमा हिन्दु दर्शनले जातिय छुवाछुत र विभेद निम्त्याएको बताउनुभएको छ । उंहाले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक स्टाटस् मार्फत नेपाली समाज जबसम्म हिन्दु दर्शनको आधारमा चल्नेछ तबसम्म यस देशमा जातिय छुवाछुत र विभेदको पर्खाल जिउँदो रहने भन्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष मगरले हिन्दु दर्शनलाई मानव सेवा र समाज सेवाको रुपमा लागु गर्नकालागी दास युगमा प्रयोग गरिएका मनुस्मृति लगाएतका दर्शन आधुनिक युगसंगै परिमार्जन र विकास गरिनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।‘यदि यसो गरिएन भने यो २१ औं शताब्दिमा हिन्दु दर्शनले सिंगो मानव जातिलाई सेवा नभई घिन लाग्दो पीडा मात्रै दिनेछ ।’
आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा अध्यक्ष रोकाले नवराज विकले कथित माथिल्लो जातिको युवतिलाई सहमतिमा प्रेम गर्दा ज्यानै गुमाउनु परेको यो घटनाको जति नै निन्दा गरेपनि कम नै हुने बताउनुभएको छ । घटनाको घोर भ’त्सर्ना गर्नुभएको छ । साथै पिडितलाई उचित क्षतिपुर्तिको माग गर्दै ह त्यामा संलग्नहरुलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न सरकारसंग जोडदार अपिल समेत गर्नुभएको छ ।
यसका साथै अध्यक्ष रोकाले यस्तो अमानवीय जघन्य आपराधीक घटना दोहोरीन नदिन समाज र सरकारलाई बढी सचेत रहन आग्रह गरेका गर्नुभएको छ । सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्नकोलागी मानवअधिकाबादी संगठन, सामाजिक संगठन र राजनैतिक दलहरुलाई दबाब दिन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ । अध्यक्ष रोकाले जाजरकोटको यो घटना नेपाली समाज र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकालागी ठूलो चुनौती भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
जाजरकोट भेरी नगरपालिका प्रमुख सिपी घर्तीले रुकुम पश्चिममा घटाईएको घटना निकै नै ड’रलाग्दो ह त्या का ण्ड भएको बताउनुभएको छ । पिडितकै घरमा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले यो घटना मानव जातिकैलागी अक्षमय घटना भएको बताउनुभएको हो ।
प्रमुख घर्तीले कमीकम्जोरी मान्छेबाटै हुन्छ तर त्यसलाई सुध्रने मौका दिनुको साटो मान्छे नै मा’रिदिने ? भन्दै आ’क्रोशपुर्ण भावमा यो एउटा मानव जातिबाट घटेको साह्रै नै निन्दनिय घटना भएको बताउनुभएको छ । उंहाले यस्तो प्रकारको घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारवाही गरिनु पर्ने पनिबताउनु भएको छ ।
पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै प्रमुख घर्तीले अब जाजरकोट जागीसकेको छ भन्दै यदि कसैले पनि यो घटनालाई तो’डमोड गरेर दोषीलाई उम्काउने प्रयास गर्छ भने त्यो आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । साथै उंहाले दोषीलाई उम्काउने या घटनाको रुपलाई फेरबदल गर्ने जस्ता काम गरेर एउटा अ’प’राधलाई ढाक्नकोलागी अर्को अ’प’राध नगर्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रमुख घर्तीले यो समय लकडाउनको नहुन्थ्यो भने स्थितिलाई नि’यन्त्र’णमा लिन गाह्रो पर्ने बताउनुभएको छ । उंहाले यस्तो लकडाउनको बेलापनि यति धेरै जमातमा सामाजिक दुरीलाई कायम नगरिकन याहाँका जनताहरु जाग्न सकेका छन् भने सामान्य दिन र सामान्य समय भएको भए हामीले परिकल्पना गर्नै नसक्ने गरी याहाँ जनमास र आन्दोलनको अर्को रुप श्रृजना हुने थियो ।
Prevनेपाल भारतमा अत्याधिक प्रयोग भएको यो औषधिले बिरामीको मृ*त्यु भइरहेको डब्लुएचओको खुलासा
Nextकोरोना संक्रमित ह्वातै बढेर ५ हजार हुने सङ्केत पाएपछि सरकारले भित्रभित्र चाल्यो यस्तो कदम !
बाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडेकी यी युवतीको जीवनमा पत्याउनै मुस्किल पर्ने घटना, रहिनन् संसारमा
लकडाउनको समयमा भक्तपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्या*न गयो
दुखद खबर: इटहरीकी १३ बर्षिय अनुस्काको मृ’त्यु
नवराजका प्रेमिकाका भाई पहिलाे पटक मिडियामा: नवराज बारे यति ठुलाे खुलासा (हेर्नुहोस भिडियो)
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60385)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50206)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (44748)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44427)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43083)
वैशाख ३ गतेपछि यस्तो छ आवतजावतको तयारी , ३ गते सम्म धैर्य गरौ (41086)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37583)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35875)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (28828)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27317)
यि हुन् संसारकै मोटा बालक जसले यसरी घटाए आफ्ने १०८ किलो तौल (भिडियो हेर्नुस्)
जाडोमा खुट्टा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो उपाय अपनाउनुहोस्।
अभागीको हद ! एउटै व्यक्ति’लाई मलेरिया, डेंगु र कोरोना! उनैलाई कोब्रा-सर्पले पनि टोक्यो..
भीमेश्वर मन्दीरकाे शिलामा आयो फेरि पसिना, मुलुकमा अशुभ हुने संकेत, बिगतमा के के भए ?
महिलामा यसकारण हुन्छ बाँझोपन, यस्तो लक्षण देखिए रहनुहोस् सावधान !